ဒီဇိုင်း၊ အနုပညာဒီဇိုင်းနှင့်လက်မှုစက်ရုံများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ၀.၂ မီလီမီတာ Dichroic Iridescent PVC film မှော်ပစ္စည်း တော်ဝင်
Dichroic ရုပ်ရှင် (ကိုယ်တိုင်ကော်)
Dichroic PVC ရုပ်ရှင်ကား
Dichroic TPU ရုပ်ရှင်
Cold Stamping သတ္တုပါး
၀.၂ မီလီမီတာ Dichroic Iridescent PVC film အလှဆင်ခြင်း၊ အနုပညာဒီဇိုင်းနှင့်လက်မှုပညာအတွက်မှော်ပစ္စည်း
၀.၂ မီလီမီတာ Dichroic Iridescent PVC film အလှဆင်ခြင်း၊ အနုပညာဒီဇိုင်းနှင့်လက်မှုပညာအတွက်မှော်ပစ္စည်းသည်အိတ်များ၊ ဖိနပ်များနှင့်အဝတ်အစားများအလှဆင်ခြင်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသော PVC နှင့် iridescent film ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနုပညာဒီဇိုင်းနှင့်လက်မှုပညာပြုလုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၅ နှစ်ကျော်အလှဆင်ထားသောရုပ်ရှင်အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဥရောပ၊ အမေရိကန်နှင့်အာရှစျေးကွက်အများစုသို့ရောင်းချသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ၊ အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်အရည်အသွေးကောင်းကိုသင်ကမ်းလှမ်းပါမည်။
လျှံ၏ကုန်ပစ္စည်းနိဒါန်း PVC ရုပ်ရှင်
Iridescent PVC film သည် PVC film နှင့် PET fantasy film တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
Polyvinyl chloride, အင်္ဂလိပ်အတိုကောက် PVC, polymerin သည် vinyl chloride monomer မှထွက်လာသည်။ peroxide (သို့) အလင်းနှင့်အပူ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်အစွန်းရောက် polymerization ယန္တရားဖြင့်ပေါ်လီမာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Chloroethylene homopolymers နှင့် vinyl chloride copolymers ကိုစုပေါင်း vinyl chloride resins ဟုခေါ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်သော PVC ၏မော်လီကျူးအရေအတွက်မှာယေဘုယျအားဖြင့် ၅၀၀၀၀ မှ ၁၁၀,၀၀၀ အထိရှိသည်။ ၎င်းတွင်ကြီးမားသည့် poly disparity ရှိပြီးpolimérizationအပူချိန်လျော့ကျမှုနှင့်အတူမော်လီကျူးအရေအတွက်တိုးပွားလာသည်။ ပုံသေအရည်ပျော်မှတ်မရှိဘဲ၎င်းသည် ၈၀ မှ ၈၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ပျော့ပြောင်းပြီး ၁၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် viscoelastic ဖြစ်လာသည်။ ၁၆၀ မှ ၁၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် viscous စီးဆင်းမှုအခြေအနေရှိပါကကောင်းမွန်သောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ဆန့်အားသည် 60MPa ခန့်ရှိပြီးသက်ရောက်မှုစွမ်းအား5~ 10kJ / m2; အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ dielectric ဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်။
အလင်းရောင်ထောင့်ရွေ့လျားလာသည်နှင့်တောက်ပသောအရောင်လေဆာရောင်ခြည်သည်အလင်းရောင်အောက်တွင်အလွန်တောက်ပ။ ရွေ့လျားနေသည်။ အလင်းရောင်မှရွေ့လျားသွားသောအခါရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲသွားသည်။ ထို့ကြောင့် dichoric iridescent PVC film သည်ဖက်ရှင်လက်ကိုင်အိတ်များ၊ မိတ်ကပ်အိတ်များပြုလုပ်ရာတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည် ကျယ်ပြန့်အဆင့်မြင့်ဇာတ်စင်ဒီဇိုင်းနှင့်အလှဆင်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
iridescent ၏ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက် PVC ရုပ်ရှင်
Dichroic PVC ရုပ်ရှင်
ပစ္စည်း PVC အရှည် 100 မီတာ, 200 မီတာ, 1000 မီတာ ......
အထူ 0.1mm-0.8mm အရောင် ရွှေအပြာရောင်၊ အနီရောင်ပန်းရောင်စသည်တို့ဖြစ်သည်
အကျယ် 0.965m လျှောက်လွှာ အိတ်များ、 ဖိနပ်နှင့်အလှဆင်ခြင်း
ကုန်ပစ္စည်းအင်္ဂါရပ် ၏ လျှံ PVC ရုပ်ရှင်
ထုတ်ကုန် လျှောက်လွှာ လျှံ PVC ရုပ်ရှင်
ဖိနပ်များ၊ အိတ်များ၊ လက်ကိုင်အိတ်၊ အဝတ်အထည်၊ စာရေးကိရိယာအိတ်များ၊ ဖိနပ်များ၊ သားရေကုန်ပစ္စည်းများ၊ အလှကုန်အိတ်နှင့်လက်မှုပညာများ။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် လျှံ PVC ရုပ်ရှင်
Dichroic Iridescent Film ၏ထုတ်ကုန်အရည်အချင်း
1, ငါဘယ်လိုရနိုင် က နမူနာ?
ယေဘုယျစည်းမျဉ်းအရ၎င်းသည်ငွေပေးချေပြီးနောက်လုပ်ရက် ၁၀ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိကြာလိမ့်မည်။
သင်၏မေးမြန်းချက်ကိုရရှိပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်း၊ အသေးစိတ်၊ အသေးစိတ်၊ အရွယ်အစား၊ အရောင်၊ အရေအတွက်၊ အထူးတောင်းဆိုမှုစသည်တို့ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
၄ ။ မှာယူမှုကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်မည်သို့သိသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါသည်။
၅ ။ Are မင်း တတ်နိုင် ရန် ထုတ်လုပ်ခြင်း ငါတို့ ဒီဇိုင်းများ, အရွယ်အစား နှင့် အရောင်တွေ?
ရှေ့သို့ အလှဆင်အသုံးပြုရန်အတွက်အပြာရောင် Dichroic Iridescent film PET
နောက်တစ်ခု: စက္ကူဘုတ်နှင့်ထုပ်ပိုးရန်အတွက် Holographic Metalized Lamination Film အမျိုးမျိုးအတွက် PET & BOPP
PVC Dichroic ရုပ်ရှင်
Transparant PVC Dichroic ရုပ်ရှင်
၀.၄ မီလီမီတာ Dichroic Iridescent TPU ရုပ်ရှင် ...
၀ င်ရန်အတွက် 0.4mm Dichroic Iridescent PVC film ...
အနီရောင်ပန်းရောင် Dichroic Iridescent Cellophane ရုပ်ရှင် ...
Holographic Metalized Lamination ရုပ်ရှင်အမျိုးမျိုး ...
ဖိနပ်၊ အိတ်များပြုလုပ်ရန် 0.2mm Iridescent TPU ရုပ်ရှင်။
ဖန်သားအတွက် Blaze Dichroic Iridescent Window Film ...
ငါတို့ Jiangxi Royal Import & Export Co. , Ltdနှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည့် Hot Stamping Foils၊ Holographic Film, Iridescent / Dichroic Film, Iridescent / Dichroic Window Film, Iridescent PVC / TPU Film, Fine Chemicals နှင့်အခြား…
Rm 501 Global Centre၊ ဂန်းမြစ်၊ Yanjiang Mid၊ လမ်း၊ တရုတ်၊